व्यवसायी हिक्मत मालीको निधन, शुक्रबारै दाहसंस्कार हुने
काठमाडौं । व्यवसायी हिक्मत मालीको ६२ वर्षको उमेरमा शुक्रबार विहान निधन भएको छ । क्यान्सर रोगबाट पीडित मालीको चावहिल स्थित ओम अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । करिव तीन वर्षदेखि..
​सुनको भाउ सात सय घट्यो, तोलाको ५२ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं, फागुन ६ गते । बुधबार स्थानिय बजारमा सुनको भाउ तोलामा ७ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबारका लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको ५२ हजार रुपैयाँ..
सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको नेतृतवमा पाँच बैंकले रिभरफल्स हाइड्रोमा सवा अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं, फागुन १ गते । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको नेतृतवमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक, भिबोर विकास बैंक र सिटिजन्स बैंकले ९ हजार ५ सय किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमताको रिभरफल्स हाइड्रोपावर..
कान्तिपुरको जिप जलाइयो
कलैया (बारा), फाल्गुन १ गते ।कान्तिपुर पत्रिकामा कलैयामा भइरहेको आन्दोलनको समाचार प्रकाशित नगरिएको विरोधमा आज कान्तिपुरको लु १ च ४३३६ नम्बरको जिपलाई आन्दोलनकारीहरुले आगो लगाइदिएका छन्। मालपोत, नापी, भूमिसुधार कार्यालय कलैयाबाट..
​अर्थ समितिले कालो धनबारे अर्थमन्त्रि र गभर्नरसँग जानकारी लिने
काठमाडौं, फाल्गुन १ गते । स्वीस बैङ्कमा अनाधिकृत रुपमा राखिएको नेपालीको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कालो धनबारे अर्थ समितिले सरकारसँग जानकारी लिने भएको छ । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकले सो..
​प्रेम दिवसलाई ४० लाखको रातो गुलाफ भित्रियो
ललितपुर, माघ २९ गते । आउँदो प्रणय दिवसका लागि करिब ४० लाखको रातो गुलाफको फूल काठमाडौँ भित्रिएको छ । रातो गुलाफ प्रेमको प्रतीक मानिन्छ । ‘फ्लोरीकल्चर एसोसिएसन’का अध्यक्ष लोकनाथ गैरेका अनुसार..
​स्विट्जरल्यान्डको सिँचाइमा पौने दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौं माघ २७ गते । स्विट्जरल्याण्ड सरकारले साना सिँचाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रू. एक अर्ब ७८ करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मङगलवार आयोजित एक..
काठमाडौं माघ २५ गते । सुनचाँदी र विदेशी मुद्राको अबैध कारोबार गरेको अभियोगमा प्रहरीले राजधानीबाट आज ५ जना ब्यवसायीलाई झन्डै ५ करोड रकम सहित पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा..
​व्यवसायी विन्दलको अपहरणमा संलग्न ५ जना पक्राउ, गोली हानाहानमा २ घाइते विशाल
झापा, माघ २३ गते । विर्तामोडका अलौंची व्यवसायी सुनिलकुमार विन्दलको अपहरणमा संलग्नु ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । झापाको धरमपुर–२ स्थित हर्क कन्दङ्वाको घरबाट प्रहरीले उनीहरुलाई शुक्रबार पक्रेको हो..
पोखरीमा विष हालिदिँदा पाँच लाखका माछा मरे
महोत्तरी, माघ २३ गते । महोत्तरीको प्रकौली गाविस– ५ स्थित एक पोखरीमा गएराति अज्ञात समूहले विषादी हालिदिँदा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको माछा नष्ट भएको छ । प्रकौली– ५ बस्ने बजरङ्ग यादवको..
सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना बनाउन दबाब
काठमाडौ, माघ १९ गते । सरोकारवालाहरूले सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिएका छन् । काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका सभासद्, पूर्वसभासद्, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिलगायत जनप्रतिनिधि र..
काठमाडौं माघ १८ गते । नारायणी सिमेण्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारत निकासीको तयारी गरेको छ। बाराको लिपनीमालस्थित उद्योग परिसरमा शनिबार आयोजना भएको मेची–कोशीका डिलरहरुको उद्योग अवलोकन तथा बिजनेस मिट कार्यक्रममा..
​काठमाडौं माघ १८ गते । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विश्व बैैङ्कको सहयोगमा ठूलोे क्षमताका बायोग्यास प्लान्टको प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई मुलुकभर सञ्चालन गर्ने भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमअन्र्तगत व्यावसायिक र नगरक्षेत्रका..
काठमाडौं १४ माघ । नेपालले आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेल्न पाउने पक्का भएको छ। बुधबार दुबईमा बसेको आइसीसी बोर्ड बैठकले केन्या र नेपाललाई वर्ल्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलाउने निर्णय..
​जोन प्लेयर्सको ब्रान्डेड आउटलेट मानभवन, ललितपुरमा
काठमाडौं माघ १४ । जोन प्लेयर्स सूर्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तर, स्टाइल र उत्कृष्ट बनोटको सम्मिश्रण रहेको पुरुष पहिरनको लागि नेपालको अग्रणी ब्रान्डले आफ्नो एक्सक्लुसिभ ब्रान्डेड आउटलेट मानभवन, ललितपुरमा शुभारम्भ गरेको छ। आफ्ना..
​बिहे हुन तीन दिनअघि बेहुलीले आत्महत्या
झापा २०७१ माघ १४ । बिहे हुन तीन दिनअघि शनिअर्जुन नगरपालिका–४, लक्ष्मीपुरकी बेहुली कल्पना घिमिरेले झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छिन् । माइतीघरबाट अन्मेर पतिको घर जान लागेकी २१ वर्षीया घिमिरे रेडियो सन्देश,..
​सिन्धुपाल्चोकमा ओगटेर राखेका ३३ विद्युत् आयोजना खारेज
चौतारा माघ १३ । झोलामा खोला ओगट्ने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३३ स्थानमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि परेका निवेदनहरु रद्द गरिएका छन्। जिल्लाका विभिन्न नदीनालाबाट १०० देखि एक हजार किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादनका लागि..
​कृषि मन्त्रालयको अर्ध वार्षिक समीक्षा : कृषि परियोजनाको प्रगति न्यून
काठमाडौँ माघ १३ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर अगाडि सारेका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको र लक्ष्यित प्रगतिसमेत हासिल हुन नसकेको पाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले तय गरेको चालु..
काठमाडौ माघ १२ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छुट योजनाअन्तर्गत २ हजार ९९ सय करदाता थपिएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्मको ७ शीर्षकका छुट योजनामा भने..
काठमाडौं माघ ११ । विवादका कारण स्थगित हुँदै आएको पुरानो बसपार्कस्थित ‘काठमाडौं भ्यु टावर’ निर्माण योजना कार्यान्वयन हुने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बी कोइ कम्पनीबीच शनिबार..
सिमरा, माघ १ । करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा विवाद भएपछि कर्मचारीहरुले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) माथि कुटपिट गरेका छन् । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेसु रामशंकर ठाकुरलाई विकास समिति कर्मचारी युनियनका..
​बन्दमा साझा यातायात तोडफोड
काठमाडौं २९ पुस । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले गरेको उपत्यका बन्दमा दुई वटा साझा बसमा तोडफोड भएको छ । बन्दको बेला अरु बस नचलेपनि बिहानदेखि चलेको साझा..
क्रोएसियामा पहिलो महिला राष्ट्रपति
क्रोएसिया, २८ पुस । क्रोएसियाको चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धाका बीच विपक्षी दलकी दाबेदार कोलिन्दा ग्रेबर पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न सफल भएकी छन् । मत गणनाअनुसार कोलिन्दाले ५०.५ प्रतिशत मत हासिल गरेकी छन्..
​इमरान खानले गरे पत्रकारसँग बिहे
​इस्लामावाद, पुस २५ । पाकिस्तानका पूर्वक्रिकेटर तथा नेता इमरान खानले टेलिभिजन एंकर रेहाम खानसँग विवाह गरेको पुष्टि गरेका छन् । इमरानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) को आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टले उनको..
​स्टार खेलाडीहरुको गोल वर्षाले बार्सीलोनाको शानदार जित
पुस २५ । स्पेनिस किङ्स कप फुटबल अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा बार्सीलोनाले एल्चेलाई ५-० को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। ला लिगा अन्तर्गतको पछिल्लो खेलमा पराजित हुँदै आएको बार्सीलोनाले किङ्स कपमा उत्कृष्ट..
शेष घलेले घोषणा गरे एक अर्वको परोपकारी कोष
काठमाडौं पुष २४ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अध्यक्ष शेष घलेले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरी एक अर्ब रुयैंयाको परोपकारी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार..
​बैङ्कर रविनालाई सिंगापुरमा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
काठमाडौं पुस २४ । मेगा बैङ्कका नायब महाप्रबन्धक रविना देशराज श्रेष्ठले सिंगापुरबाट प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरेकी छन् । इन्डोनेसियाका राजाको प्रमुख आतिथ्यतामा सिंगापुरमा भव्य समारोहकाबीच उनलाई ‘लेडी अफ एक्सिलेन्स..
नयाँदिली पुष २३ । भारतीय खुफिया एजेन्सी सीबीआईले सन् २०१४ को अन्तिमसम्ममा ८ हजार नेपाली युवतीलाई तस्करहरुले दिल्ली हुँदै दुबई पुर्‍याएको खुलासा गरेको छ । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) को..
Results 344: You are at page 11 of 12